Dameen Haqaa Ameerikaa lootee seentota duula filannoo Tiraamp qorachuuf - BBC News Afaan Oromoo
Dameen Haqaa Ameerikaa lootee seentota duula filannoo Tiraamp qorachuuf
21 Caamsaa 2018
Pirezidaanti Tiraampi yeroo hedduu dhimma iccitii filannoo wayita kaasan ni lolu, murtee siyaasaafaa labsu- Twiitara isaaniirratti
Dameen Haqaa Ameerikaa Biiroon Sakattaa Biyyaalessaa (FBI) karaa ergamtoota isaa duula na filadhaa bara 2016 Pirezidaanti Tiraamp geggeessaa turan basaasuu fi dhiisuu isaa qorachuuf jira.
Obbo Tiraamp toora Twiitaraa isaaniirratti, bulchiinsi isaan dura ture basaasa raawwate jedhamu kana ajajaan duuba jiraachuu fi dhiisuu isaa baruu akka barbaadan barreessu.
Sakatta'iinsi akka geggeeffamu kan labsame erga miidiyaan Ameerikaa gareen Biiroo Sakattaa Federaalaa biyyattii addatti marii fi qindoomina qaban jiraachuu gabaasaniiti.
Duula filannoo bara 2016 ilaalchisee basaasaa raawwatamaa tureef Raashiyaan komatamaa turte, sakatta'iinsis geggeeffamaa ture.
Pirezidaanti Tiraampi bara duula na filadhaa geggeessaa turan gara Kiremliin goranii Raashiyaa hamachaa turan yaada jedhu mormanii Twiitara isaaniirratti baayyinaan barreessan. Itti aansuunis sakatta'iinsi eenyu akka basaasaa turerratti akka geggeeffamu gaafatan.
Qaamoleen seera hojiitti hiikan dhimma kanarratti odeeffannoo miseensota kongiresiif kennuurraa of qusataniiru.
Sana boodadha Pirezidaanti Tiraampi akka dameen haqaa dhimmicha sakatta'ee dhiyeessu kan gaafatan.
Muular fi warra dubbii deddeebisan
Waggaa tokko dura Hoogganaa Biiroo Sakattaa Federaalaa Ameerkaa kan ta'an Roobert Muular dhimma basaasaa Raashiyaadhaan raawwatame qorachuurratti xiyyeeffataniiru.
Biiroon kun qorannoosaa bara 2016 eegale, garuu warri dubbii deddeebisan akkamiin akka seenan wanti beekame hin jiru.
Roobarti Muular siyaasa Ameerkaa keessatti leellistoota hedduu qabu
Akka Obbo Muular jedhanitti Hoogganaan Biiroo Sakattaa Ameerkaa duraanii, dhimma kanarratti namoota 19 adabaniiru. Kun utuu ta'ee jiruu garuu Pirezidaanti Tiraampii fi deggertoonni isaanii hojii nama kanaa qeequu hin dhiisne.
Pirezidaanti Tiraampi ragaa qabatamaa tokko malee dilbata kaleessaa qorannoon duraan geggeeffamaa ture akka addaan cite gaafatani, qorannoo geggeeffamaa tureef maallaqi doolaara Ameerkaa miiliyoona 20 fi namoonni 13 kanneen miseensa warra Dimokiraatotaa ta'an irratti hirmaataniiru. Obbo Muular garuu miseensa Rippaabilikaaniiti.
Tiraamp, Ministira hojii alaa Reeks Tilarsan hojiirraa har'ian
Finciltoonni TPLF Affaar seenuun aanaalee sadii to'achuu naannichi hime
'Badhaafamaan Noobeelii waraana keessatti hirmaachuun waan baratame miti'
WHO himata Itoophiyaan Dr Teedroos irratti dhiyeessite hin ilaaliin hafe
'Wixineen labsii gabatee konkolaataa naannoo hambisa jedhame oduu sobaati'
Viidiyoo, 'Dhiyeenya kana nama nubiraa baasan keessaa namni saddeet du'eera', Turtii 2,41
'Finciltoonni Tigraay daangaa Affaar seenanii haleellaa raawwachaa jiru' - Naannoo Affaar
'Ani nama abaaramtuudha jedheen yaadaa ture'
Istaadiyeemi Kaameruunitti wal dhiibuu uumameen yoo xinnaate lubbuun namootaa 8 darbe
Keeniyaa fi US waraana Itoophiyaa saffisaan xumuruuf marii godhamu jabeessuuf waliigalan